ဘာသာခြားနဲ့ယူခဲ့မိတဲ့ "ရင်​နင့်​​ကြေကွဲစရာ အဖြစ်​​အပျက်​ တခု" - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဘာသာခြားနဲ့ယူခဲ့မိတဲ့ "ရင်​နင့်​​ကြေကွဲစရာ အဖြစ်​​အပျက်​ တခု"
ဘာသာခြားနဲ့ယူခဲ့မိတဲ့ "ရင်​နင့်​​ကြေကွဲစရာ အဖြစ်​​အပျက်​ တခု"
အရွယ်​မ​ရောက်​​သေးတဲ့ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​ ဘာသာခြား ​ကောင်​​လေးနဲ့ ခိုးရာလိုက်​​ပြေး​တော့ မိဘ​တွေက သ​ဘော မတူသလို ဥပ​ဒေအရအသက်​မပြည့်​​သေးတဲ့အတွက်​ နှစ်​ဖက်​မိဘ​တွေ​ရှေ့မှာ ခွဲ​ပေးပြီး မိဘ​တွေလက်​ထဲ အပ်​​ပေးလိုက်​တယ်​။ ( အောက်ဆုံးတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်တွဲတင်ပေးထားပါသည် )
အကိုဖြစ်​တဲ့သူက ဇရှိတဲ့သူတစ်​​ယောက်​ဖြစ်​​နေ​တော့ ကျ​နော်​ က “ဒီကိစ္စမျိုးက ​ဒေါသနဲ့စိတ်​လိုက်​မာန်​ပါလုပ်​လို့မရဘူး. ..စိတ်​​အေး​အေးထား၍ ​ချော့​မော့ပြီး ​ဖျောင်းဖျ​ပြောဆိုရမယ်​…ကိုယ့်​ညီမ ကိုယ့်​ဆီပြန်​​ရောက်​​နေပီဘဲ့ အခက်​ခဲရှိရင်​လည်း လာခဲ့..ကူညီ​ဆောင်​ရွက်​​ပေးမယ်​” လို့ အတတ်​နိုင်​​ဆုံး​ဖြောင်းဖျ ​ပြောဆို​တာ့… “ဟုတ်​ကဲ့ပါအစ်​ကို…မဖြစ်​​စေရပါဘူး ကျ​နော်​ကိုယ်​ကျ​နော်​ထိန်းပါ့မယ်​” လို့​… ပြောပြီး ပြန်​သွားလိုက်​တာ။
မိနစ်​ ၂၀ ခန့်​ကြာ​တော့….ဖုန်းဆက်​လာတယ်​…အစ်​ကိုအရင်းက ညီမအရင်းကို သစ်​သားတုတ်​နဲ့ရိုက်​လိုက်​ပီတဲ့။
ကျ​နော်​​ရောက်​သွား​တော့ ဦး​ဏှောက်​မှာ ဟက်​တက်​ကွဲ​နေ​တော့ ​ဆေးရုံပို့ရပီ​ပေါ့​ဗျာ…​ငွေ​ကြေးမတတ်​နိုင်​​တော့လည်း ….နီးစပ်​ရာ​ဆေးရုံမှာဘဲ့…​ဆေးကုသရတာ​ပေါ့ ဗျာ။​ဆေးရုံးတက်​ပြီး ၇ ရက်​​မြောက်​တဲ့​နေ့မှာ သူ့ညီမ​လေးဆုံး​တော့ အစ်​ကိုဖြစ်​သူကို ဖမ်းရပြီ​ပေါ့။ အ​မေလုပ်​တဲ့သူခမြာ….ရင်​ကြိုးရပီ​ပေါ့…ကြားရတဲ့သူတိုင်းကလည်း…စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​ရပီ​ပေါ့ ….
ဒါ​ကြောင့်​….ကျ​နော်​တို့ရဲ့ ညီအစ်​ကို​မောင်​နှ​မ​တွေအားလုံး ဒီအဖြစ်​အပျက်​ကို…သင်​ခန်းစာယူပီး…. ယခုလို ရင်နင့်စရာ​​အဖြစ်​အပျက်​မျိုးမဖြစ်​ရ​လေ​အောင်​…ဘာသာတရားအဆုံးအမ​အောက်​မှာ သတ်ိပြု ဆင်​ခြင်​ထိမ်းသိန်းနိုင်​ကြပါ​စေလို့. ..ဆန္ဒပြုရင်း။
Credit to Tay Za Oo
အရှယျ​မ​ရောကျ​​သေးတဲ့ မိနျးက​လေးတဈ​​ယောကျ​ ဘာသာခွား ​ကောငျ​​လေးနဲ့ ခိုးရာလိုကျ​​ပွေး​တော့ မိဘ​တှကေ သ​ဘော မတူသလို ဥပ​ဒအေရအသကျ​မပွညျ့​​သေးတဲ့အတှကျ​ နှဈ​ဖကျ​မိဘ​တှေ​ရှမှေ့ာ ခှဲ​ပေးပွီး မိဘ​တှလေကျ​ထဲ အပျ​​ပေးလိုကျ​တယျ​။ ( အောကျဆုံးတှငျ ဗီဒီယိုဖိုငျတှဲတငျပေးထားပါသညျ )
အကိုဖွဈ​တဲ့သူက ဇရှိတဲ့သူတဈ​​ယောကျ​ဖွဈ​​နေ​တော့ ကြ​နျော​ က “ဒီကိစ်စမြိုးက ​ဒေါသနဲ့စိတျ​လိုကျ​မာနျ​ပါလုပျ​လို့မရဘူး. ..စိတျ​​အေး​အေးထား၍ ​ခြော့​မော့ပွီး ​ဖြောငျးဖြ​ပွောဆိုရမယျ​…ကိုယျ့​ညီမ ကိုယျ့​ဆီပွနျ​​ရောကျ​​နပေီဘဲ့ အခကျ​ခဲရှိရငျ​လညျး လာခဲ့..ကူညီ​ဆောငျ​ရှကျ​​ပေးမယျ​” လို့ အတတျ​နိုငျ​​ဆုံး​ဖွောငျးဖြ ​ပွောဆို​တာ့… “ဟုတျ​ကဲ့ပါအဈ​ကို…မဖွဈ​​စရေပါဘူး ကြ​နျော​ကိုယျ​ကြ​နျော​ထိနျးပါ့မယျ​” လို့​… ပွောပွီး ပွနျ​သှားလိုကျ​တာ။
မိနဈ​ ၂၀ ခနျ့​ကွာ​တော့….ဖုနျးဆကျ​လာတယျ​…အဈ​ကိုအရငျးက ညီမအရငျးကို သဈ​သားတုတျ​နဲ့ရိုကျ​လိုကျ​ပီတဲ့။
ကြ​နျော​​ရောကျ​သှား​တော့ ဦး​ဏှောကျ​မှာ ဟကျ​တကျ​ကှဲ​နေ​တော့ ​ဆေးရုံပို့ရပီ​ပေါ့​ဗြာ…​ငှေ​ကွေးမတတျ​နိုငျ​​တော့လညျး ….နီးစပျ​ရာ​ဆေးရုံမှာဘဲ့…​ဆေးကုသရတာ​ပေါ့ ဗြာ။​ဆေးရုံးတကျ​ပွီး ၇ ရကျ​​မွောကျ​တဲ့​နမှေ့ာ သူ့ညီမ​လေးဆုံး​တော့ အဈ​ကိုဖွဈ​သူကို ဖမျးရပွီ​ပေါ့။ အ​မလေုပျ​တဲ့သူခမွာ….ရငျ​ကွိုးရပီ​ပေါ့…ကွားရတဲ့သူတိုငျးကလညျး…စိတျ​မ​ကောငျးဖွဈ​ရပီ​ပေါ့ ….
ဒါ​ကွောငျ့​….ကြ​နျော​တို့ရဲ့ ညီအဈ​ကို​မောငျ​နှ​မ​တှအေားလုံး ဒီအဖွဈ​အပကျြ​ကို…သငျ​ခနျးစာယူပီး…. ယခုလို ရငျနငျ့စရာ​​အဖွဈ​အပကျြ​မြိုးမဖွဈ​ရ​လေ​အောငျ​…ဘာသာတရားအဆုံးအမ​အောကျ​မှာ သတျိပွု ဆငျ​ခွငျ​ထိမျးသိနျးနိုငျ​ကွပါ​စလေို့. ..ဆန်ဒပွုရငျး။